Nei Mac Yangu Ichinonoka? Inogona An Apple Computer Kuwana A Virus? - Mac
ndakadonhedza iphone yangu uye screen rakanganiswa
Iphone wont negadziriro yeparutivi kuna iTunes
app chitoro pane ipad isiri kushanda
Nei Mac Yangu Ichinonoka? Inogona An Apple Computer Kuwana A Virus?
Ndiri kuzokuudza sei Mac yako iri kumhanya zvishoma , bvisa iyo nyonganiso nezve hutachiona uye Apple, uye kukutora iwe munzira yekugadzira yako MacBook kana iMac kumhanya senge nyowani.
Ndakafemerwa kunyora ichi chinyorwa mushure mekuverenga mubvunzo waBeth H. pa Bvunza Payette Pamberi nezvekuti sei Mac yake yaimhanya zvishoma nezvishoma. Akange ave kuApple Chitoro uye achifunga kuti komputa yake yaive nehutachiona nekuti aiona iyo inotyisa kutenderera muraraungu pinwheel yedambudziko kazhinji uye kakawanda.
Vashandi veApple vakamuudza kuti maMac haakwanise kuwana hutachiona uye vakamutumira munzira yake, asi vakasiya chikamu chikuru chenyaya iyi - ini ndichatsanangura zvakanyanya munguva pfupi. Chokwadi ndechekuti, Genius Bar kugadzwa kunoitwa nenguva uye masoftware nyaya anogona kunetsa kuongorora, saka iyo Genius Bar kazhinji inoenda imwe yenzira mbiri:
Erase Mac yako uye dzosera kubva kuTime Machine backup (Iyo Huru Nyundo - inoshanda imwe yenguva nekumisazve mafaira epamoyo ako, asi nyaya unokwanisa gara.)
Bvisa Mac yako, isumise seyatsva, wobva wadzosera manyore data rako pachako, zvinyorwa, mimhanzi, mapikicha, nezvimwe. Chaizvoizvo Big Hammer - yakagadziriswa yakawanda yakagadziriswa, asi inogona kunge iri kunetsa kukuru.)
Ndiri kuzokufamba nematanho mashoma akareruka ekukubatsira iwe kuona izvo zviri kudzikisira Mac yako uye nekukuendesa munzira chaiyo yekuigadzirisa.
Macs Anogona Kuwana maVirusi?
Iyo yakareba uye ipfupi pairi ndeiyi: Ehe, maMacs anogona kuwana hutachiona, asi haudi kuchengetedzwa kwehutachiona! Izvo zviri kutaurwa, kana iwe uchiona iyo pini pweti yedambudziko uye komputa yako inononoka kunge tsvina, zvirokwazvo pane chakashata.
Saka Chii Chiri Kunonoka Mac Yangu Pasi?
Kana vanhu vachifunga 'hutachiona hwecomputer', ivo vanowanzofunga nezvechirongwa chakaipa chinoshanda pachacho mukombuta yako iwe usingazive. Pamwe wakavhura email, pamwe wakaenda kune 'zvisirizvo' webhusaiti - asi aya marudzi ehutachiona kazhinji haapo kune maMac, kunyangwe aripo have vanga vari kunze. Kana aya mavhairasi akaonekwa, Apple inovabvarura ivo nekukasira. Kunyangwe pandakanga ndiri kuApple, ini handina kumboziva chero munhu akange abatwa nehutachiona hwakadai, uye ndakaona akawanda maMac.
Mac yako iri panjodzi yerudzi rwehutachiona hunodaidzwa kuti 'Trojan Horse', iyo inowanzo kunzi 'Trojan'. Trojan Horse chidimbu che software icho unotora, woisa, uye wopa mvumo yekumhanya pane yako Mac. Ehezve, software iyi haina kunzi 'Virus! Usandiise! ', Nekuti dai zvirizvo, hazvo, haunga kurodha pasi nekuriisa.
Pane kudaro, software ine Trojan Horses inowanzozonzi MacKeeper, MacDefender, kana imwe software inovimbisa kubatsira komputa yako, nepo ichitova nemhedzisiro. Ndakaonawo mawebhusaiti anoti iwe unofanirwa kutora vhezheni itsva yeFlash kuti uenderere mberi, asi software yaunotora haina kubva kuAdobe - ndeye Trojan. Ndiri kungoshandisa aya mazita semienzaniso - ini handikwanisi kuvimbisa zvemhando yechero chidimbu che software. Kana iwe uchida kuzviongorora wega, Google 'MacKeeper' uye tarisa pane zvinobuda.
Pamusoro pazvose, rangarira izvi: Chete kurodha pasi software zvakananga kubva kukambani inoigadzira. Kana uchida kurodha Flash, enda kuAdobe.com uye utore pasi kubva ipapo. Usazvitora kubva chero imwe webhusaiti , uye izvo zvinoenda kune yega chikamu che software. Dhawunirodha ako anodhiraivha madhiraivha kubva hp.com, kwete bobsawesomeprinterdrivers.com. (Haisi webhusaiti chaiyo.)
Chikamu chezvinoita kuti maMac akachengetedzeka ndechekuti software haigone kungozvirodha nekumisikidza pachayo - unofanirwa kuzvipa mvumo yekuzviita. Ndosaka uchifanira kutaipa pasiwedhi yekomputa yako pese paunoisa software nyowani: Icho chimwe chikamu chechengetedzo chinobvunza kuti, 'Uri chokwadi unoda kuisa software iyi? ” Zvakangodaro, vanhu vanoisa Trojan Horses nguva dzose , uye kana vachinge vapinda, vanogona kunetsa kubuda.
Macs haidi MacKeeper, MacDefender, kana chimwe chezvidimbu zve software icho chinonzi chinoda kukurumidza komputa yako. Saizvozvo, ivo vanowanzo deredza zvinhu kana zvakanyanya. MacKeeper ndeye Trojan Horse nekuti iwe wakazvipa iyo mvumo yekumhanyisa pakombuta yako senge chero chimwe chidimbu che software yawakadhawunirodha ukaisa.
maitiro ekugadzirisa marongero anotakura
Kana iwe usati waisa chero yechitatu-bato software (kana 'bloatware') pakombuta yako, inogona kuve chero nhamba yezvimwe zvinhu. Ngatitarisei mashoma:
Iko Komputa Yako Iri Kunze Kwemweya Here?
Chimwe chinhu chekutarisa pane Chiitiko Monitor. Chiitiko Monitor inoratidza kuti ndeapi mashure maitiro (iwo madiki madhizaini anomhanya asingaonekwe kumashure kuita kuti komputa yako ishande) ari kubaya kumusoro kwako kwese system zviwanikwa. Ini ndinotengesa iwe uchaona chimwe chinhu chakakwenenzvera iyo CPU inosvika ku100% paunenge uchiona iyo inotenderera pinwheel yedambudziko. Heano maitiro ekutarisa:
Vhura Chiitiko Chekuvhura nekuvhura Spotlight (tinya girazi rinokudza mukona yekurudyi kona yekona yako), uchitaipa Activity Monitor, wobva wadzvanya pane Chiitiko Monitor (kana pinda Return) kuti uzarure iyo.
Dzvanya pamenyu inodonhedza pamusoro apa 'Ratidza' panotaura chimwe chinhu senge 'Maitiro Angu' uye uchichinje icho 'Maitiro ese'. Izvi zvinokuratidza zvese zviri kumhanya kumashure pakombuta yako. Zvino, tinya iko kwazvinoti '% CPU' (musoro weiyo ikholamu) kuitira kuti iratidze bhuruu uye museve uri kunongedza pasi, zvichiratidza kuti iri kukuratidza izvo zvirongwa zviri kumhanya pakombuta yako mukuburuka kurongeka kubva kune izvo zviri kutora yakanyanya CPU simba kudiki.
Ndeapi maitiro ari kutora yako ese CPU? Zvakare, tinya Sisitimu Yekurangarira pazasi kuti uone kana iwe uine yakakwana yemahara System Memory. Mangani MB (megabytes) kana GB (gigabytes) akasununguka kuti zvirongwa zvishande pane yako system? Kana iwe ukawana kunyorera kana maitiro ari kubaya zviwanikwa zvese zvecomputer yako, panogona kuve nechinetso neapp iyoyo. Kana uchikwanisa, edza kuisunungura uye ona kana dambudziko razvigadzirisa pacharo.
Iwe Une Zvakakwana Mahara Hard Dhiraidhi Nzvimbo?
Ngationgororei kuve nechokwadi chekuti mune yakakwana yemahara dhiraidhi nzvimbo yekushanda nayo. Iwo wakanaka mutemo wechigunwe kuti ugare uine kanenge kaviri zvakapetwa hard drive nzvimbo yemahara sezvaunenge uine RAM yakaiswa pakombuta yako. MuApple lingo, RAM inonzi Memory. Ndine 4GB ye RAM yakaiswa palaptop iyi saka izano rakanaka kuva neinenge 8GB yedhiraivho yedhiraivhi inowanikwa nguva dzese. Apple yakavakwa nenzira iri nyore chaizvo yekutarisa izvi uye ndichakufamba nayo.
Kutanga, tinya Apple menyu mune yekumusoro kuruboshwe kona yekrini chako - tsvaga iyo Apple logo kuruboshwe kwezita rechirongwa chauri kushandisa izvozvi. Wobva wadzvanya 'Nezve Mac iyi'. Iwe uchaona kuti yakawanda sei RAM yawakaisa ipapo ipapo padhuze ne 'Memory'. Zvino tinya 'Rumwe Ruzivo ...' uye tinya pane 'Kuchengeta' tebhu. Yakawanda sei nzvimbo yemahara yaunayo pane yako hard drive?
Iri harisi rondedzero yakazara yezvose zvinogona kunge zvichinonotsa Mac yako, asi ndinovimba izvi zvinonongedza iwe munzira kwayo. Iyi posvo hapana mubvunzo basa riri kuenderera mberi, asi pamwe chete, ndine chokwadi chekuti tichaona nekugadzirisa zvimwe zvezvinhu zvakajairika zvinoderedza maMac.
Ndatenda zvakare nekuverenga uye ini ndinotarisira kunzwa kubva kwauri!